Isibhamu seglue esishisayo esincibilikayo, isibhamu seglue iron glue, isibhamu somoya oshisayo, isibhamu seplastiki sokushisela, ifektri yokudonsa amathini nabakhiqizi | Boda
Isibhamu se-glue esishisayo, esinomphumela onembile wokuqhekeka, imibhobho ehlukahlukene, ingahlangabezana nezidingo zemigqa ehlukene yokukhiqiza, ukwakheka kwesihlungi esiyingqayizivele, okunikela ekuhlanzeni nakwezinye izici. Isibhamu se-glue esishisayo esijwayelekile ngeke sikhubazeke lapho sisetshenziswa ku-300 ℃ isikhathi eside, futhi ilunga lihlala isikhathi eside. Ngakho-ke, umshini wokunamathisela oshisayo osetshenziswa kakhulu kufektri ye-elekthronikhi, ifektri yokudla, ifektri yokupakisha, njll. Ukuze kuvalwe ukushiyeka kwesibhamu se-othomathikhi nokuhlangabezana nezidingo zokusetshenziswa kweselula, igobolondo lomzimba wesibhamu lenziwa wezinto ezingenisiwe, ezingamelana nokushisa okuphezulu okungama-300 ℃ futhi kuqinisekise ukuthi akukho deformation ngaphansi kokushisa okuphezulu isikhathi eside. Umzimba wesibhamu ulula ngesisindo futhi kulula ukuwusebenzisa. Idizayini eyingqayizivele yedivayisi yokuvikela ingavimbela opharetha ekushiseni ngokunganaki lapho esebenza; ukuhlangana kwendawo yonke kuhlanganiswe nobuchwepheshe obuphambili baseYurophu kwenza kube lula ukusebenza nokuqina; isikulufa, umucu, indawo nenkungu kungasetshenziswa ezimbonini ezahlukahlukene
I-iron soldering iron iyithuluzi elidingekayo lokugcinwa kukagesi. Inhloso yayo enkulu ukuxhuma izingxenye ze-Du nezintambo. Ngale ndlela, ubuso bezingxenye zokushisela ezihlanzekile kanye ne-solder zifudunyezwa kusimo sokushisa esithile ukwenza i-solder incibilike, futhi ukusabalala kwensimbi kwenzeka kusixhumi esibonakalayo bese kwakha ungqimba lokubopha, ukuze kufinyelele insimbi yensimbi.
Lapho ushisela insimbi, bamba insimbi kagesi yokunamathisela ngomthofu ngesandla sokunene njengoba kukhonjisiwe ku-Fig. 1-20, bese ubamba into noma ucingo ngesandla sobunxele ngamaphini empumulo ekhombe noma udlawana. Ngaphambi kokushisela, insimbi kagesi kufanele ishiswe ngokuphelele. Inani elithile le-solder kufanele liphathwe emaphethelweni ekhanda le-iron soldering. Beka onqenqemeni lwekhanda lensimbi le-soldering eduze nejoyini le-solder. Insimbi kagesi icishe ibe ngama-60 ° endizeni enezingqimba. Ukuze kube lula ukuhamba kukathayela oncibilikisiwe kusuka ekhanda le-solder kuya ekuhlanganyeleni kwe-solder. Isikhathi sokugcina sekhanda le-soldering ejoyini le-solder kufanele silawulwe ngaphakathi kwemizuzwana engu-2-3. Phakamisa ikhanda lensimbi le-soldering, futhi isandla sobunxele sisabambe isici namanje. Ngemuva kokuthi ithini ejoyini le-solder selipholile futhi laqina, isandla sokunxele singakhishwa. Sebenzisa udlawana ukuvula ucingo oluholayo. Ngemuva kokuqinisekisa ukuthi ayikhululekile, unganqamula intambo yokuhola engasafuneki nabasiki bezinhlangothi.
Isibhamu se-Plastic welding sisetshenziswa kakhulu endwangwini yokukhangisa, ngoseyili, ulwelwesi olungangenwa ngamanzi, i-anti-seepage liner, ulwelwesi olungenamanzi, ipayipi, izinto zikagesi, imoto bumper, phansi kwezemidlalo, iparele ukotini ukucubungula, ithangi lokufaka ugesi, ipayipi lepulasitiki, ipuleti le-PP / PE / PVC ulwelwesi isakhiwo Welding kanye ukukhanda geomembrane wendawo.
Akuvunyelwe ukusebenzisa ugesi owonakele noma ulayini wamandla ukushaja; akuvunyelwe ukuyisebenzisa ngaphansi kwezimo ezimbi kakhulu noma endaweni eshisa kakhulu (elangeni elishisayo noma emotweni eshisayo); akuvunyelwe ukuqaqa ibhethri nokuguqula izingongolo ezinhle nezimbi; akuvunyelwe ukungqongqoza, ukuphonsa, ukunyathela, nokugingqa isibhamu seglue; akuvunyelwe ukufaka izindaba zangaphandle zensimbi echwebeni lokushaja; akuvunyelwe ukusebenzisa ibhethri yangaphandle ukunikeza amandla; ngemuva kokuthi ibhethri lisuliwe, kufanele lifakwe ukwelashwa okuphelele. Okokusebenza akumele kusetshenziswe yizingane noma abantu abanobuthakathaka ngokomzimba noma ngokwengqondo, noma ngokuntula ulwazi nolwazi, ngaphandle uma bengaphansi kokuqondiswa noma ukufundiswa; gada izingane ukuthi zingadlali ngemishini. Uma intambo yamandla yale divayisi ilimele, kufanele ithathelwe indawo kuphela ngumhlinzeki wesevisi yethu, edingeka njengethuluzi elikhethekile kanye / noma ingxenye.
1, Sicela ufunde yonke imithethonqubo yokuphepha nemiyalo ngaphambi kokuyisebenzisa. Sicela ugcine le manuwali ukuze uyisebenzise esikhathini esizayo.
1. Ungavumeli abantu abangajwayelene nesibhamu seglue noma abangayazi le mithetho yokuphepha kanye nemiyalelo basebenzise isibhamu seglue.
2. Izingane ezingaphansi kweminyaka eyisishiyagalombili azivunyelwe ukuyisebenzisa. Qiniseka ukuthi induku ayitholakali ezinganeni ezingaphansi kweminyaka eyisishiyagalombili. Kukhona ingozi yokuminyaniswa uma ugwinya induku.
3. Izingane nabantu abanokukhubazeka ngokomzimba, izinzwa noma izingqondo noma abanakho okuhlangenwe nakho nolwazi abavunyelwe ukusebenzisa izibhamu zeglue. Izingane ezingaphezu kweminyaka eyisishiyagalombili ubudala nabantu abanokukhubazeka ngokomzimba, kwezinzwa noma ngokwengqondo noma abanolwazi olunzulu nolwazi bangasebenzisa lesi sibhamu seglue uma begadwe umuntu ophethe ukuphepha kwabo noma beyalelwe ngumqaphi ngokusetshenziswa glue gun, futhi ngiyiqonde imithetho yokuphepha nemiyalo.
4. Izingane azivunyelwe ukuhlanza, ukugcina nokusebenzisa isibhamu seglue ngaphandle kokuqondiswa.
5. Hlola isibhamu seglue ngaphambi kokusetshenziswa ngakunye. Lapho isibhamu seglue nentambo yokushaja kutholakala ukuthi yonakele, ngeke isasetshenziswa. Sicela ungasivuleli isibhamu seglue uwedwa. Ochwepheshe abaqeqeshiwe kuphela abangasebenzisa izesekeli zangempela ukugcinwa.
6. Ngemuva kokuthi kuvulwe isibhamu seglue, akuvunyelwe ukuthi kungagadiwe.
7. Ungathinti umlomo wombhobho nomkhono we-silicone.
8. Ochwepheshe abaqeqeshiwe kuphela abavunyelwe ukusebenzisa izingxenye zokuqala zokulungisa isibhamu seglue. Kungale ndlela kuphela lapho ukusebenza komkhiqizo kungaqinisekiswa.
9. Akuvumelekile ukusebenzisa isibhamu seglue lapho sifakwe emanzini noma simanzi.
10. Ungayilahli induku emlilweni.
2, imithetho yokuphepha ekukhokhiseni
1. Ungakhokhisi ngokusetshenziswa, ungakhokhisi amabhethri ashisayo.
2. Akuvumelekile ukukhokhisa etafuleni elinokutsha (njengephepha, indwangu, indwangu, njll.) Noma endaweni evuthayo.
3. Ungakhokhisi emanzini noma esimweni esimanzi.
3, Incazelo yomkhiqizo nokusebenza
I-1, izibhamu zeglue zilungele ukusetshenziselwa ukubopha mahhala, njengephepha, ibhodi lephepha, ukhokho, ukhuni, isikhumba, izindwangu, amagwebu, amanye amapulasitiki, izitsha zobumba, ubumba, ingilazi namatshe.
2. Ilungele ukubopha, ukulungisa, ukuhlobisa nokumodela.
3. Akulungele izinto ezinamazinga okushisa okuhlanganisa ama-degree angama-50 nangaphezulu.
4. Akulungele ukubopha izinto ngokuxhumana ngqo namanzi noma uketshezi.
Sicela ubuyisele emuva inkinobho yokushintsha, ilambu eliluhlaza okwesibhakabhaka lizokhanya.
Sicela udonse inkinobho yokushintsha uye phambili ukukhombisa ukuthi iswishi icishiwe.
3. Uma ilambu eliluhlaza okwesibhakabhaka licishiwe, kufanele likhokhiswe ngesikhathi. Ilambu elibomvu liyakhanya ngesikhathi sokushaja.
4. Ilambu eliluhlaza lihlala likhanyisile, okukhombisa ukuthi ugesi ugcwele
5. Sicela ugcine isibhamu seglue esivaliwe ngokuphepha ngemuva kokusetshenziswa, futhi usenze sipholile ngokuphelele ngaphambi kokupakisha. Umbhobho wesibhamu oshisayo ungadala umonakalo.
6. Vikela abantu nezilwane kwi-glue eshisayo nesifonyo. Lapho i-glue eshisayo ihlangana nesikhumba, hlambulula ngokushesha ngamanzi abandayo imizuzu embalwa. Ungazami ukususa i-glue eshisayo esikhumbeni.
7. Kungasetshenziswa kuphela induku yeglu yokushisa ephansi (ukushisa okushisa phakathi kuka-100 no-150 ℃) nobubanzi obungu-6.8-7.2mm obungasetshenziswa.
8. Ungasebenzisi induku yokunamathisela ephezulu.
9. Zithintwe uketshezi, umswakama nokushisa okuphezulu, izingxenye zokunamathisela zingawa zodwa.
5, Bonding ukulungiselela
1. Indawo yokubopha kumele ihlanzeke, yomile futhi ingabi namafutha.
2. Izinto ezinamathelayo ngeke zivuthe.
3. Sicela uqale uhlole ukusebenza kwento eshisayo ngomsebenzi oyisampula.
4. Izinga lokushisa elizungezile kanye nezinga lokushisa lomsebenzi ozoboshelwa kungu-5 ℃ - 50 ℃.
5. Izinto ezingenza ukunamathela okushisayo kuphole ngokushesha kufanele kufudunyezwe ngesibhamu somoya oshisayo
Ukwehluleka izimbangela nezindlela zokwelashwa
1. Faka induku yenjoloba emgodini wokuphakela.
2. Vula isibhamu seglue bese usifudumeza imizuzwana engu-180 ngaphambi kokuyisebenzisa.
3. I-glue ingasetshenziswa ngokucindezela umshini webhodi.
4. Ngokushesha ngemuva kokufaka okunamathelayo okuncibilikayo okushisayo, cindezela izinto ezizoboshwa ndawonye imizuzwana eyi-10 kuye kwengama-30. Isimo sokubopha singalungiswa futhi.
Ngemuva kokupholisa cishe imizuzu emihlanu, indawo yokubopha ingalayishwa.
5. Qaphela ukuthi ungasebenzisi noma iyiphi ingxenye yomzimba oxhumana nayo ngqo ne-adhesive melt eshisayo ngalesi sikhathi.
6. Indawo yokubopha ingapendwa noma ifakwe imibala.
1. Ngemuva kokupholisa, susa ingcina eseleyo ngensimbi ebuthuntu. Uma kunesidingo, khulula isikhundla sokubopha futhi ngokushisa.
2. Sicela ugcine isibhamu seglue esivaliwe ngokuphepha ngemuva kokusetshenziswa, futhi usenze sipholile ngokuphelele ngaphambi kokupakisha. Umbhobho wesibhamu oshisayo ungadala umonakalo.
3. Ungawasebenzisi amakhemikhali awuketshezi avuthayo ukuhlanza indawo yokubopha. Izinsalela zokunamathisela ezishisayo ezingutsheni azikwazi ukususwa.
4. Phola bese ubeka endaweni eyomile lapho izingane ezingaphansi kweminyaka eyisishiyagalombili zingafinyeleleki khona.
Izinkinga, izimbangela nezindlela zokwelashwa
Ukondliwa kwenduku yeglue kunzima futhi isibhamu seglue asishisi ngokuphelele. Sishisa kahle imizuzwana engu-180
Ukufunza ngokushesha okukhulu
Ibhethri ephansi ishaja ibhethri
Izinga lokushisa elincibilikayo lenduku yeglue liphezulu kakhulu. Sebenzisa induku yenjoloba yokuqala enconyiwe
I-glue eshisayo incibilika ihlehlele emuva isibhamu seglue. Ububanzi benduku yeglue buncane kakhulu. Sebenzisa induku yeglue yokuqala enconyiwe
Lapho udla ngamandla, induku yenjoloba ayincibiliki ngokuphelele, bese iphakela ngemuva kokuba induku yeglue incibilikile
Ekupheleni kokunamathiselwa, lapho isibhamu seglue sisuswa endaweni yokubopha, kuzokwakhiwa "intambo". Ekupheleni kokunamathiselwa, ingcina isaphuma. Lungisa okukhipha iglue ekugcineni kwe-gelatinization.
Sula i-glue eshisayo encibilikayo ngombhobho. Ekupheleni kokunamathela, hlanza umbhobho nge-workpiece
Langaphambilini Chain, ephakamisa uchungechunge, lashukumisa chain, insimbi engagqwali uchungechunge, Ukucaciswa ahlukahlukene
Olandelayo: Jack, jack ovundlile, jack mpo, jack wokubacindezela
I-Glue Stick Gun
Isibhamu Sokunamathisela Esishisayo
I-Mini Hot Melt Glue Gun